1. FAQ Yintoni, Kutheni kwaye phi indawo yeWatermark, iiWermark kunye neeWermarking | Plum emangalisayo
Yintoni iwatermark yedijithali?
Yintoni enokwenziwa ukunqanda ubusela bezithombe?
Ukongeza i-watermark ibonisa ngobuqili, nokuba yeyiphi ifoto okanye ividiyo yakho, ukuba yeyakho.
Rhoqo, i-watermark enegama, i-imeyile okanye url ukuze indalo yakho ibe noqhagamshelo oluthile olungabonakaliyo olusemthethweni kuwe.
Ukukhuthaza nokukhusela inkampani, igama kunye newebhusayithi yakho ngokubheka zonke iifoto / iividiyo ozikhuphile.
Konke oku kungentla kudale imfuno yesoftware ukukhusela kunye nokuqinisekisa ubunini beefoto / ividiyo. Kungenxa yoko le nto senze iWatermark yeMac, Windows, Android kunye ne-iOS. Sesona sixhobo sokubabaza sikhoyo kuwo onke amaqonga.
Kwimithombo yeendaba eyadlulayo yenziwa ngezinto ezibonakalayo. Ngokwangoku iifayile, izandi kunye nevidiyo zenziwe ngamanani. I-watermark yedijithali inamanani amaninzi kwiifomathi ezahlukeneyo ezafakwa kumfanekiso, isandi kunye / okanye iifayile zevidiyo ukuzichaza. Kukho iintlobo ezi-2 zeewatchs ezisetyenziswa kwiifoto, iiwatchark ezibonakalayo nezingabonakaliyo.
I-iWatermark yenzelwe ukufaka iiwatchark zedijithali kwiifoto, imifanekiso, imifanekiso kunye nevidiyo. Ezi watermark zibonisa ubunini bakho.
Yintoni iwatermark ebonakalayo?
Ukubeka uphawu kwifoto yedijithali okanye ividiyo engeyonxalenye yefoto yasekuqaleni okanye ividiyo yivatala ebonakalayo. Le watermark ibonakala kwifoto. Ezi watermark zibonakalayo zinokukhwaza kwaye zibonakale okanye zicace kakhulu. I-watermark ebonakalayo inokuba sisicatshulwa, idilesi ye-imeyile, url, imizobo, uphawu, QR-Code, imigca, amanani, iiteki, isicatshulwa kwi-arc, isicatshulwa kwisibhengezo, i-vector, kunye / okanye umda.
I-iWatermark ivelisa zonke iiwatchark ezibonakalayo. Ayikho enye inkqubo ye-watermark evelisa iintlobo ezininzi ze-watermark.
Yintoni iwatermark engabonakaliyo?
Iindidi ezi-2 zeewatchs ezingabonakaliyo yi-stegomark kunye nemethadata.
I-Stegomark yenziwa yiPlum emangalisayo yokufihla igama, isivakalisi, i-imeyile, url nayiphi na imali encinci. I-stegomark igxunyekwe kwifoto. I-stegomark ngamanani afihlwe yi-algorithm ethile kwifoto. I-Stegomark inokuba nephasiwedi okanye hayi. I-Stegomark kunzima ukuyikhupha kwifoto kuneelwatchark ezibonakalayo. I-Stegomark iyakwazi ukujamelana nokuphindaphinda kwakhona kwe-jpg. Ngokwangoku ii-stegomark zenzelwe iifayile zefomathi ye-jpg kuphela. Abaphathi be-stegomark bayenziwa nguPlum emangalisayo kwaye bayinxalenye ye-iWatermark app.
Imethadatha- ifoto yiseti yedatha echaza kunye nokubonelela ngolwazi malunga namalungelo nolawulo lwe umfanekiso. Ivumela ulwazi ukuba luhanjiswe nge umfanekiso ifayile, ngendlela enokuqondwa yenye isoftware kunye nabasebenzisi babantu. Ayibonakali kodwa inokuboniswa ngeendlela ezininzi zesoftware.
Ngaba iWatermark izisebenzisa njani iiwatchark ezibonakalayo nezingabonakaliyo?
I-iWatermark inoku isitampu nayiphi na i-watermark ebonakalayo kwifoto enye okanye ividiyo. Okanye ngaxeshanye inamathelisa ii-watermark ezininzi ezibonakalayo nezingabonakaliyo ngokudibeneyo kwifoto okanye ividiyo. Obu buchule obuhlukileyo, umzekelo, buvumela iWatermark yokongeza uphawu olubonakalayo kunye nesicatshulwa esibonisa umhla njenge-watermark ebonakalayo kwifoto. Okanye iWatermark inokugqobhoza iifoto ezili-1000 ngeewatch ezininzi ezifana nelogo ebonakalayo ne
Zithini iitagi zeWatermark?
Ithegi nganye ngokwahlukileyo kulwazi oluthile lweemethadatha olufundwa kwifoto nganye luze lufakwe njenge-watermark ebonakalayo kuloo foto. Enye into eyingqayizivele yeWatermark.
Kukho iindidi ezi-3 eziphambili zemethadatha:
Echazayo -Ulwazi malunga nomxholo obonakalayo. Oku kunokubandakanya izihloko, intloko, amagama aphambili. Abanye abantu, iindawo, iinkampani, imisebenzi yobugcisa okanye iimveliso eziboniswe kumfanekiso. Oku kunokwenziwa kusetyenziswa isicatshulwa simahla okanye iikhowudi kwisigama esilawulwayo okanye ezinye izixhobo.
Amalungelo -Ukuchongwa komdali, ulwazi lobunini, iikhredithi kunye namalungelo asisiseko kumxholo obonakalayo kubandakanya imodeli kunye namalungelo epropathi. Imigaqo yokusebenzisa amalungelo kunye nenye idatha yokunika imvume yokusebenzisa umfanekiso.
Lawulo -Umhla wokudalwa kunye nendawo, imiyalelo yabasebenzisi, iziichazi zomsebenzi, kunye nezinye iinkcukacha.
Zonke ezi zinto zinokusetyenziswa njengethegi kwitermark yokubhaliweyo esetyenziswa kwifoto okanye kwiifoto.
Nceda uchaze ngokufutshane isigama sento yokujonga amanzi?
I-watermark yedijithali ebonakalayo - ulwazi lubonakala kwifoto. Ngokwesiqhelo, ulwazi sisicatshulwa okanye uphawu, oluchaza umnini wesithombe. Leyo lwazi idityaniswe kwi-info info kodwa isabonakala.
I-watermark engabonakaliyo yedijithali -Ulwazi olungeniswe ngaphakathi kwedatha yomfanekiso kodwa luyilelwe ukuba lungabinakho ukubonwa ngabantu ngenxa yoko lwazi olufihliweyo. I-Steganography isebenzisa ubuchule obufanayo kodwa ngeenjongo ezahlukeneyo.
Metadata - lulwazi oluchazayo olungena ngaphakathi kulo naluphi na uhlobo lwefayile. Zonke izinto ezingezantsi kwe-ExIF, i-XMP, kunye ne-IPTC yimethadatha eyongezwa kwifoto. Imetadata ayitshintshi idatha yemifanekiso kodwa iigigsbacks kwifayile. I-Facebook, i-Flickr kunye namanye amaqonga ezentlalo akwi-intanethi asusa yonke le metadata (ExIF, XMP kunye ne-IPTC).
eXIF -I-Exif-Ifomathi yefayile yomfanekiso eguqulwayo (i-Exif) Uhlobo lweemethadatha eziphantse zonke iikhamera zedijithali ezigcina ngaphakathi kweefoto. I-EXIF igcina ulwazi olusisigxina njengomhla kunye nexesha elithathiweyo, useto lwekhamera, i-thumbnail, iinkcazo, iGPS kunye nelungelo lokushicilela. Olu lwazi alwenzelwanga ukuba lutshintshwe kodwa lunokususwa ngokuzikhethela kwiifoto. Ukucaciswa kusetyenziswa iJPEG, iTIFF Rev 6.0, kunye neefomathi zefayile zeRIFF WAV, ngokongezwa kweethegi zemethadatha ezithile. Ayixhaswanga kwiJPEG 2000, PNG, okanye kwi-GIF.
IPTC - sisakhiwo sefayile kunye neseti yeempawu zemethadatha ezinokusetyenziswa kwisicatshulwa, imifanekiso, kunye nolunye uhlobo lweendaba. Yaphuhliswa yi-International Press Telecunun Council Council (IPTC) ukukhawulezisa ukuthengiselana kwamazwe eendaba phakathi kwamaphephandaba kunye neearhente zeendaba.
XMP -Lwandiso lweMetadata eyandisiweyo (XMP) luhlobo oluthile lolwimi olwandisiweyo olusetyenziswa ukugcina metadatha kwiifoto zedijithali. I-XMP iye yaxhasa i-IPTC. I-XMP yaziswa ngu-Adobe ngo-2001. I-Adobe, i-IPTC, kunye ne-IDEAlungedibene nayo ukuyazisa ngo-2004 i-IPTC Core Schema yeXMP, egqithisela amaxabiso emethadatha ukusuka kwizentloko ze-IPTC iye kwi-XMP yanamhlanje.
Ndisebenzisa ukukhanya kwegumbi (okanye iFotohop). Kutheni kufuneka ndisebenzise iWatermark?
I-iWatermark ibonelela ngezixhobo ezijongiweyo ezingafumanekiyo kwigumbi lokukhanya. Umzekelo, i-watermark yombhalo kwi-Lightroom yenye yesayizi ehleliweyo kwiiphikseli ukwenzela ukuba i-watermark ihluka ngokuxhomekeke kwisisombululo sezithombe ezihlanjulweyo. Ngelixa i-iWatermark ineewermark zewari ezithi zikhethe ngokokulingana ngokuxhomekeke kwisisombululo okanye imizobo. Igumbi lokukhanya lisebenzisa iiphikseli ukumisela indawo ye-watermark ngelixa iWatermark ibeka i-watermark ngokulinganayo isekwe kwisigqibo okanye kumzobo. Oko kuthetha ukuba watermark batch yeefoto zesisombululo ezahlukileyo kunye / okanye imbonakalo yomhlaba okanye umfanekiso we-iWatermark unokuba ne-watermark egcina inkangeleko efanayo / ifane kuzo zonke ezi ntlobo zeefoto. I-iWatermark ikwanokhetho olunokulinganisa. Oku kwa-2 umahluko omkhulu.
Ngaba imethadatha ekwifoto ingasetyenziselwa ukujonga imifanekiso?
Ewe! Oku kubizwa ngokuba ziiWatermark tag. Iimpawu zeWatermark zingenza imethadatha engabonakaliyo ibe yimbonakalo ebonakalayo. Umzekelo kukho imethadatha yokuba zonke iikhamera zifake kwifoto yegama lekhamera, uhlobo lweelensi, umhla kunye nexesha lefoto, indawo (ngeGPS) kunye nezinye ezininzi. Kwi-watermark yokubhaliweyo ukhetha iithegi zayo nayiphi na kwezi, 'njengegama lekhamera', emva koko loo watermark yokubhaliweyo yenza ukuba kubonakale apho ufuna khona kwifoto, kubungakanani, umbala, ifonti, njl. Ngoku, masithi ufumene amangenelo angama-2356 okhuphiswano lwezithombe. Kuya kufuneka ubeke igama lekhamera kunye nomhla kunye nexesha lefoto nganye nganye. Emva koko usebenzisa iWatermark ngokuzenzekelayo ubeka zonke iifoto ezingama-2356 ngexesha elinye, ifoto nganye iya kubonisa igama elichanekileyo lekhamera kunye nexesha kunye nomhla, kuba iWatermark ifunda kwaye isebenzisa imethadatha efanelekileyo kwewatermark nganye, kwaye uyibeke kuloo foto ngasezantsi ngasekunene ifonti yakho oyithandayo kunye nobungakanani befonti. Konke ngaphandle kokuba uphakamise umnwe okanye uzame ukufumanisa konke oko. UMGCINI wexesha omkhulu.
Ngaba iWatermark ingabhala imethadatha ifoto?
IWatermark inokufunda kwaye ibhale imethadatha ngeendlela ezahlukeneyo zokufaka okanye zokuguqula imethadatha kwifoto. Umzekelo ukuba usebenza kwiReuters okanye kwiNew York Times Newspaper njengomfoti, kuya kufuneka ukongeza imethadatha kwiifoto zakho. Basenokukucela ukuba ungeze igama lakho, ilungelo lokushicilela, indawo, njl. Zonke ezi zinokongezwa ngokusebenzisa iWatermark metadata watermark. Nje ukuba wenze iWatermark metadata watermark ke, kwixa elizayo, ucofe kuyo kwaye ungayisebenzisa kwiifoto ezi-1 okanye ezingama-221,675 kwifoto enye. Kuluncedo kakhulu ukwenza onke amanqaku eemethadatha ozifunayo ukuze zibe sezandleni kwaye ungazisebenzisa xa kufuneka njalo. Azikho ezinye ii-watermark ezinje. IWatermark yahlukile kwaye kuphela kwesicelo esidala iiseti zemethadatha kwaye singazisebenzisa ngokuzenzekelayo kwiifoto njengoko kufuneka.
Kutheni le nto kufuneka ndibukele imifanekiso endiyibeka kuFacebook, Twitter, Instagram, Tumblr, njl.
Owona mbuzo mhle! Kuba zonke ezo nkonzo zisusa imethadatha yakho kwaye ngeloxesha akusekho naluphi na ulwazi olubopha olo foto kuwe. Abantu banokutsala umfanekiso wakho kwiidesktop zabo kwaye babelane nabanye kude kungabikho nxibelelwano kuwe kwaye akukho lwazi kwifayile ethi uyidalile okanye yeyakho. Kule meko i-watermark ebonakalayo iqinisekisa ukuba wonke umntu ucacile kwinto yokuba ifoto ye-IP yakho (impahla yelungelo lokuqonda). Awusoze wazi ukuba ifoto oyithathileyo iya kuba yintsholongwane. Thepha apha kweminye yemizekelo yobusela beefoto eziye zaqala ukuba nentsholongwane.
Ngaba ifoto yePirates okanye ubusela befoto?
Ifoto yePiracy isoloko ithathwa njengabantu beendaba zentlalo abaye babamba ifoto yakho kwaye bayisebenzisa ngaphandle kwemvume kodwa ngaphandle kokuthengisa.
Ifoto Ubusela kulapho inkampani isebenzisa ifoto yakho ngeenjongo zorhwebo. Kule meko unezizathu ezithile zokubabeka ityala njengomyili weefoto okanye ividiyo.
Ngaba kunokwenzeka ukuba ubambe ityala lesela?
Ewe, ilungelo lokushicilela lilungelo lepropathi. Phantsi koMthetho weLungelo lokushicilela kaRhulumente ka-1976, iifoto zikhuselwe lilungelo lokushicilela okoko ufota umfanekiso wakho, zikhuselwe ngumthetho. Akunyanzelekanga ukuba ubhalise okanye ubabhalele njengamalungelo obunini; zezakho.
Ukuba inkampani okanye umntu othile ukhuphele iifoto zakho kwaye azibonise esidlangalaleni. Bazisebenzisela iinjongo zabo. Ukongeza ukuba bazisasaza kwabanye, okanye benza imisebenzi ephuma kubo iphula ilungelo lakho lokushicilela ukuba yenziwa ngaphandle kokunxibelelana nawe nokufumana imvume yakho.
Xa ifoto yakho okanye ividiyo ibiwe emva koko umfoti ungaphulukana nengeniso nokwamkelwa. Kuyenzeka ukuba igama lakho lisokolise xa kungacaci ukuba ngubani obile. Ijaji iyazithathela ingqalelo zonke ezi zinto xa ikhupha isigwebo.